Karroota seennii magaalaa Finfinneetti wiirtuuwwan gabaa 7 ijaarramuufu – Fana Broadcasting Corporate
Finfinnee, Onkololeessa 7, 2012 (FBC) – Karroota seennii magaalaa Finfinneetti wiirtuuwwan gabaa 7 ijaarramuufu.
Qaala’iinsa gatii muul’atu tasgabbeessuuf karroota seennii magaalaa Finfinneetti wiirtuuwwan gabaa 7 ijaarramuuf akka ta’e Ministeerri Daldalaa fi Indaastirii beeksise.
Mootummaan oomishaalee nyaatan walqabatan karaa Eejansii Hojiilee Gamtaa, Koorporeeshinii Hojiilee Daldalaa, Dhaabbata Misooma Galteewwan Indaastirii fi karaa Waldaalee Hojii Gamtaa Shamattootatiin gatii mdaalawaan dhiyeessuuf hojjechaa jiraachuu ministeerichatti ministir deettaan damee hojimaata daldalaa fi reegulaatorii obbo Isheetee Asfaaw ibsaniiru.
Namoota diinagdeen isaanii gadi aanaa ta’eef oomishaalee nyaataan walqabatan gatii madaalawaadhan dhiyeessuu qaqqabamaa taasisuuf, karroota seennii Finfinneetti wiirtulee gabaa ijaaruun barbaachisaadhas jedhaniiru.
Wiirtulee gabaa torban kanneenittis Yuuniyeenonnii fi Hojiileen Gamtaa naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa oomishaalee isaanii akka dhiyeessan ni hojjetama.
Itti aanaan daayreektara olaanaa Eejansii Gamtaa Hojii Finfinnee obbo Sisaay Araggaan gama isaanitiin bulchiinsa magaalaa Finfinneetti waldaaleen gamtaa hojii shamattootaa 143 oomishaalee nyaataan walqabatan gatii madaalawaadhan dhiyeessuuf hojjechaa jiru jedhan.
Manni Maree bakka Buu’ota Ummata wixinee labsii dhiyaate irratti mari’ate